Distrika any amin’ny faritra : misy fandaminana ny fitaterana olona | NewsMada
Distrika any amin’ny faritra : misy fandaminana ny fitaterana olona
Mandeha ny fitaterana olona any amin’ny faritra tsy voakasin’ireo fepetra mano­kana, voarara tanteraka, toy ny eto Analamanga, Atsinanana, Moramanga, Fenoarivo Atsi­nanana any Analanjirofo, sns. Nanome fanazavana mikasika izany ny tale jeneraly (DG) ny Antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety (ATT), ny jeneraly Reribake Jeannot.
Notsipihiny fa ny fitantanam-paritry ny ady amin’ny Covid-19 (CRCO) no mandrindra ny antsipiriany ny fandaminana ny fitaterana isaky ny distrika. Voakasik’izany ny fitaterana any amin’ny distrika ao anatin’ny faritra iray. Tan­jona ny tsy hisian’ny fitangoronan’ny olona be loatra isaky ny toby fiantsonana. Koa, to­kony hosarahana ny tsena sy ny toby fiantsonana. Ampiri­sihina koa ny mpandeha hanao ny famandrihan-toerany amin’ ny alalan’ny antso an-telefaonina mba tsy hivezivezena be eny amin’ny toby fiantsonana.
Manampy ireo, nilaza ny DG-n’ny ATT, fa tokony ha­rindran’ny kaoperativa ny ora fiaingana sy ny fahatongavan’ ny fiara fitaterana mba tsy hitangorona be loatra ny olona. Tsy ampitoviana ny ora fiaingana sy fahatongavana isaky ny toerana aleha. Ary farany, mila hapetraka ny fepetra ara-pahasalamana efa fanao, toy ny fametrahana ny toerana fanasan-tanana, ny arotava, ny fanadiovana amin’ny ranom-panafody ny toby fiantsonana, ny fandraisana ny anaran’ny mpandeha, sns.